It is me. Ko Niknayman.: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ကြေညာချက်။ (နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်)။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ကြေညာချက်။ (နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်)။
Posted by Ko Niknayman at 3:29 PM